Living Kamuri Sets Factory - China Living Kamuri Sets Vagadziri, Vatengesi
YF-H-802 yakadzikama girazi tafura yepamusoro yezvino sideboard yekicheni
Nemuchena wayo wakachena wakachena kubwinya, mitsara yakachena yakajeka uye musiyano wakasarudzika kune dhizaini yazvino, ino inoshanda uye inoshamisa setiraini padivi inopa yakawanda yekuchengetedza nzvimbo uye hwaro hwakakwana kuratidza yako TV kana zvinhu zvekushongedza.
YF-H-801 Yakasarudzika Kicheni Kuchengetera Sideboard Cabinet muNdarama
Yakasimba uye inogadzirwa huni huni zvakanaka neyakaomeswa simbi isina chinhu mugoridhe kupedzisa kuve nechokwadi chenguva-refu sevhisi kwemakore.
Simudza-pamusoro tafura yekofi inotipa chimwe chinhu chakakosha uye chinowanzo kufuratirwa: icho chidiki chekuwedzera chekuchengetedza icho chinowanzoita mutsauko wese. Ndicho chimwe chezvikonzero nei matafura ekofi ane masherufu akavakirwa uye machubbies ari anozivikanwa uye achikosheswa.
Chengetedza zvinhu zvako kure nemeso evashanyi vako uchipa yako yekutandarira rustic centerpiece iyo inochengetedza nzvimbo yako isina kuzara. Neye yedu inoshamisa yekusimudza-yepamusoro inogadziridzwa tafura yekofi, yako yekutandarira yekushongedza haizombove yakafanana.
YF-H-805 Yakakwira End Yekupedzisira Quilted Mugadziri Marble Buffet
Iri sideboard rine siluetti yakaomesesa ine simbi isina simbi furu iyo inosimudzira chero nzvimbo ine kukwezva kwekunakidzwa.